तेह्रथुममा गाउँपालिका अध्यक्षमाथि मु’क्का प्र’हार – Sadhaiko Khabar
तेह्रथुममा गाउँपालिका अध्यक्षमाथि मु’क्का प्र’हार
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८ समय: १६:५५:२२
काठमाडौं / तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बूमाथि मु’क्का प्रहा’र भएको छ । आइतबार दिउसो गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका रकम निकासी गर्न आग्रह गर्दा लेखापाल सुजन थापाबाट अध्यक्षमाथि मु’क्का प्रहा’र भएको बताइएको छ ।
आठराई गाउँपालिकाका कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा कार्यलयमै हा’नाहान परेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष र लेखापाल थापाबीच भ’नाभन हुँदैगर्दा हा’त हा’लाहाल भएको हो । भ’नाभन गर्दै गर्दा लेखापालको नजिकै पुग्नु भएको बेला अध्यक्षमाथि मु’क्का प्र’हार भयो । तर अर्का कर्मचारीले छे’केकोले उहाँलाई लागेन।’
को’रोना सं’क्रमणसँगै स्वा’स्थ्य सम’स्यामा रहनु भएको अध्यक्ष लिम्बू लामो समयपछि पछिल्लो समय कार्यालयमा एकसाता अघिबाट मात्रै उपस्थित हुनु भएको बुझिएको छ ।
उपस्थित हुँदा गत आर्थिक वर्षकै १५८ शिर्षकका योजनाको रकम समेत निका’सा नभएको अवस्थामा खाता रोकिएको रहेको बुझिएको छ । उक्त शिर्षक योजनाका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पुगेपनि लेखा शाखामा आएर रोकीएको एक अधिकारीले बताउनु भयो । सोही विषयमा बुझ्दा उहाँहरुबीच हा’त हा’लाहाल भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
‘सबै प्रकृया पूरा गरेर पनि रकम किन निकासी नगरेको ? भनेर प्रश्न गर्दा मैले के गर्न सक्छु ? भन्दै मु’ख ला’गेपछि हा’त हा’लाहालको स्थिती आयो’ – अर्का एक कर्मचारीले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाले रकम निकासी नगर्दा को’रोना म’हामारीमा ख’टिएका सु’रक्षाकर्मी र स्वा’स्थ्यकर्मीहरुलाई दिइने जो’खिम भत्ता समेत अझै निकासा हुन नसकेको बताइएको छ ।
खानेपानी आयोजना, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका योजना, सडक निर्माणका योजनाहरुका सबै सबै रकम निकासीका लागि प्रकृया पुग्दा पनि लेखापालले रोकेर राखेको गाउँपालिकाकै कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
सबै योजना तथा भत्ता वापतको रकम निकासीका लागि हुनुपर्ने प्रकृया पूरा हुँदा पनि लेखा शाखाबाटै रकम निकासी नहुने गरेको अन्य कर्मचारीहरुको पनि गुna’सो छ ।
अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ सुजन थापा आएपछि गाउँपालिकाका हामी सबै कर्मचारीले समयमा तलव पाएका छैनौँ ।’ उहाँले सबै योजनाका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीयबाट तोक लाग्दा पनि रकम निकासा नगरेको आ’रोप लगाउनु भयो ।
उता अध्यक्ष लिम्बूले भने रकम निकासी किन रोकियो ? छरितो गर्नुहोस भन्दा आफूमाथि हा’तपात गरेको आ’रोप लगाउनु भयो । आफूमाथि हा’तपात भएपछि आफूले पनि आ’वेगमा आएर हा’त फ’र्काको बताउनु भयो ।
लेखापाल थापाले द’लाली गर्नका लागि यी सबै हर्क’तहरु गरेको अध्यक्ष लिम्बूले आ’रोप लगाउनु भयो । जनताको नि’राशा र अस’न्तुष्टिलाई हल गर्ने प्रयास गर्दा आ’फूमाथि नै लेखापाल ख’निएको उहाँले गुना’सो गर्नुभयो ।
वि’गतमा पनि आफूलाई र’क्सी खाएर आउने भन्दै नी’राधार आ’रोप लगाउने गरेको अध्यक्ष लिम्बूले बताउनु भयो । योजनाको रकम तथा अन्य निकासी दिएवापत रकम लिनका लागि निकासी रोकेर राखिएको अध्यक्षको आ’रोप छ ।
उता लेखापाल थापालाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन उहाँले कहिल्यै पनि फोन नउठाउने तथा फोन सँधै अफ गरेर राख्ने गरेको अर्का एक कर्मचारीको भनाइ छ । – न्युज 24 नेपा’लबाट सा’भार ।